कोरोना भयाभह बनिसक्यो तर अब यसरी जोगिन सकिन्छ :वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षित | Namastee e-News
कोरोना भयाभह बनिसक्यो तर अब यसरी जोगिन सकिन्छ :वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षित
नमस्ते ईन्यूज,१३ भाद्र । वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालमा कोरोना भयाभह बनिसकेको बताउँनुभएको छ । उहाँले कोरोना भयाभह बनिसक्यो तर अब यसरी जोगिने उपाय छन् भन्दै केही सुझावहरु दिनुभएको छ । नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ रु भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो मैले सुरु देखि नै नेपालमा कोरोना संक्रमण भयाभह हुन्छ भन्दै आएको थिए । सरकारले म जस्ता चिकित्सकका कुरा सुन्नै चाहेन । चैत १० देखि लकडाउन त गर्यो तर बिना तयारीको लकडाउनले कोरोना संक्रमण रोक्न सकेन । अहिले कोरोना संक्रमण व्याप्त भएको छ । कसरी महामारीको रुपा लिदैछ कोरोनाले अब हेरौँ । अब पनि सचेत नहुने हो, भने देश सखाप हुन्छ ।
संक्रमण रोक्ने सरकारका पहलहरु किन सफल बन्न सकेनन् ?
सरकारले पहल नै गरेन । गाल टार्ने काम मात्रै गर्यो । अझ लकडाउन देखाउने दाँत मात्रै भयो । जनताले ५ ९ ६ महिना देखि खाना पाएका छैनन् । काम गर्न पाएका छैनन् । अहिले फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । बिना तयारीका यस्ता प्रयासहरुको कुनै अर्थ छैन । संक्रमण रोक्नका लागि खोई उपाय । नागरिलाई बचाउनका लागि खोई प्रयास । नागरिकले के खाएर बाच्ने हो । यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान नै छैन ।
अबको अवश्था कस्तो होला त ?
भन्नै सकिन्न । परिक्षणको दायर बढाउने हो ,भने संक्रमितको संख्या निकै ठूलो हुने छ । अहिलेको अवश्थामा त आइसियू र भेन्टिलेटरको कमीले संक्रमितहरु मरिरहेका छन् । यसैमा ठूलो परिणाममा संक्रमितको संख्या थपिदा विजोग हुन्छ । थेगिनसक्नु हुन्छ ।
सर्वसाधरण नागरिकले संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने त ?
कोरोनाबाट जोगिने आफै हो । संसारमा औषधि पत्ता लागेको छैन , सबैलाई थाहा नै छ । संक्रमणबाट जोगिनका लागि भौतिक दुरी कायम गर्नु पर्यो । तातो पानी खानु पर्यो । नेपाली भान्छामा हुने मसलाजन्य कुराहरु हाम्रा लागि निकै फाइदाजनक छन् । कोरोना संक्रमण भयाभह बन्दैछ । नेपाली भान्छाका मसलाजन्य कुरा मात्रै प्रयोग गरे पनि फाइदा हुन्छ ।
सुत्नेबेला जलनेती गरौं ( नाकको एक प्वालबाट अर्को प्वालमा पानी पठाएर पानी झार्ने ) । यसले स्वासप्रस्वासमा सहज बनाउँछ । वेसार पानी खाऔं । बुर्जो लगायत औषधिजन्य जडिबुटी नियमित प्रयोग गरौँ । साबुनपानीले हात धौंऊँ । मास्क बिना बाहिर ननिस्कौं । सरकारले ईमान्दारीपूर्ण काम गर्ने र नागरिक सचेत हुने हो ,भने कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ । खानपान र जीवनशैली परिवर्तन गरौं । साभार जनबोली